Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana - India Visa Online
Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana
Ny olom-pirenen'i Etazonia dia mila Visa elektronika ho an'i India ihany koa. e Visa ho an'i India dia misy fepetra, tombontsoa, ​​takiana amin'ny karazany isan-karazany Tourist, Business ary Medical e Visa ho an'i India. Ny antsipiriany rehetra tokony ho fantatrao dia voarakitra ato amin'ity torolàlana feno ity Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana.
Ny olom-pirenena amerikana izay te-hitsidika an'i India amin'ny tanjona isan-karazany toy ny fitsangatsanganana na fizahan-tany, orinasa na varotra, na fitsaboana dia afaka manao izany izao nefa tsy mandalo fahasahiranana raha te hangataka amin'ny Visa any India. Mba hahazoana Visa ho an'ny India dia tsy mila mankany amin'ny Masoivohon'i India intsony ny olom-pirenena amerikana Consulat fa afaka mangataka izany amin'ny Internet avy any an-tranony. Nanjary mora sy mora tokoa ity dingana ity satria ny Governemanta India dia nampiditra elektronika na e-Visa ho an'i India izay azon'ny mpandeha iraisam-pirenena mangataka mba hitsidika an'i India. Visa Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana azo ampiharina mora foana amin'ny Internet ary araka ny voalaza etsy ambony dia tsy voatery mankany amin'ny Masoivohon'i India any amin'ny firenenao akory ianao vao mahazo izany.
Visa Indiana avy any Etazonia Fepetra sy fepetra takiana
Mba hahafahanao mahazo ny Visa any India ho an'ny olom-pirenenan'i Etazonia, ny tanjon'ny fitsidihanao ny firenena dia ny fizahan-tany, orinasa, na fitsaboana. Mila manana a Passport mahazatra, fa tsy ofisialy na diplaomatika, izay tokony ho izy manan-kery mandritra ny 6 volana manaraka manomboka amin'ny daty hidiranao India. Na dia tsy mitaky anao hitsidika ny Masoivoho Indianina aza ny e-Visa, dia tokony ho azonao antoka fa manana pejy banga roa ny pasipaoronao hijanonan'ny mpiasan'ny fifindra-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina. Ianao ihany no afaka mangataka amin'ny e-Visa indiana in-3 ao anatin'ny herintaona ary tsy ho azonao amin'izany raha mangataka fanindroany amin'ny taona mitovy ianao. Mila mangataka fahazoana zom-pirenena farafaharatsiny India e Visa US Citizens ianao 7 andro talohan'izay ny sidinao na ny datin'ny fidirana mankany India. Ny tompon'ny teratany Indiana sy Visa US dia tokony hiditra ao amin'ny firenena Lahatsoratra momba ny fanaraha-maso ny fifindra-monina izay misy seranam-piaramanidina 28 sy seranan-tsambo miisa 5 ary ny mpihazona dia tsy maintsy mivoaka avy ao amin'ny Poste de Immigration Check izay ekena koa.
Ny olom-pirenena Indiana sy Visa US dia manana fepetra takiana:
kopia elektronika na notarafina tamin'ny pejy voalohany (biografika) an'ny pasipaoron'ny mpitsidika, izay tsy maintsy ny pasipaoro mahazatra, ary izay tsy maintsy mijanona mandritra ny 6 volana farafahakeliny hatramin'ny andro nidirana tao India, raha tsy izany dia mila manavao ny pasipaoronao ianao
kopian'ny sary miloko pasifika an'ny mpitsidika, adiresy mailaka miasa, ary carte debit na carte de crédit amin'ny fandoavana ny sarany fangatahana. Zahao ny Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa ho an'ny olom-pirenena amerikana ho an'ny visa Visa any India
Visa Indiana avy any Etazonia ho an'ny fizahantany
Ireo olom-pirenena amerikana mandehandeha any India ho an'ny fizahan-tany sy fitsangantsanganana dia afaka manao izany amin'ny fangatahana Visa Indian Tourist ho an'ny olom-pirenena amerikana amin'ny Internet. Ity Visa ity mamela anao hijanona tsy mihoatra ny 180 andro ao amin'ny firenena ary tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny dia tsy arahin'antoka fa tsy amin'ny fivarotana. Fa ankoatry ny fizahantany dia azo ampiasain'ny olom-pirenena amerikana ihany koa ny Tourist e-Visa raha te-ho tonga any India hanatrika fandaharana Yoga mandritra ny fotoana fohy izy ireo, na handray fampianarana tsy haharitra mihoatra ny 6 volana ary tsy hanome diplaoma na diploma. taratasy fanamarinana, na ho fandraisana anjara amin'ny asa an-tsitrapo izay tsy hihoatra ny fe-potoana 1 volana. Ny zom-pirenena Indiana e Visa US ho an'ny fizahan-tany dia misy amin'ny endrika telo:
The Visa 30 mpizahatany India, izay ahafahan'ny mpitsidika mijanona ao amin'ny firenena mandritra ny 30 andro manomboka amin'ny daty nidirana ao amin'ny firenena ary a Visa fidirana indroa, izay midika fa afaka miditra indroa ao amin'ny firenena ianao ao anatin'ny vanim-potoanan'ny valin'ny Visa. Ity Visa ity dia manana ny daty famaranana voalaza ao aminy fa io no daty alohan'ny hidiranao amin'ny firenena, fa tsy ilay andro alohan'ny hivoahanao ny firenena. Ny daty ivoahana dia hofaritana amin'ny datin'ny fidiranao ao amin'ny firenena ary 30 andro aorian'ny daty voalaza.
The Visa fizahan-tany India 1 taona, izay manan-kery mandritra ny 365 andro manomboka amin'ny datin'ny famoahana ny e-Visa. Ny valin'ny Visa ity dia voafaritra amin'ny datin'ny namoahana azy, fa tsy ny datin'ny fidiran'ny mpitsidika ao amin'ny firenena. Ankoatr'izay, a Visa fidirana misimisy, izay midika fa afaka miditra amin'ny firenena imbetsaka ianao ao anatin'ny vanim-potoana maha-marim-pototra azy.
The Visa fizahan-tany India 5 taona, izay manan-kery mandritra ny 5 taona manomboka ny daty namoahana azy ary io koa dia a Visa fidirana misimisy.
Mba hahafahanao mahazo ny Tourist e-Visa ho an'i India dia mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny visa ho an'ny India ho an'ny olom-pirenena amerikana voalaza etsy ambony ianao. Hafa noho ireo izay mety angatahina aminao hanome porofon'ny fanananao vola ampy hamatsy vola ny dianao ary mijanona any India.
Visa Indiana avy any Etazonia ho an'ny orinasa
Ny olom-pirenena amerikana maniry ny hitsidika an'i India noho ny tanjona ara-barotra na varotra dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fangatahana Visa Indiana Business ho an'ny olom-pirenena amerikana amin'ny Internet. Ireo tanjona ireo dia ny fivarotana na fividianana entana sy serivisy any India, fanatrehana fivoriana ara-barotra toy ny fivoriana ara-teknika na fivoriana fivarotana, fananganana orinasa indostrialy na fandraharahana, fanaovana fitsangatsanganana, fanaterana lahateny, fandraisana mpiasa, fandraisana anjara amin'ny varotra sy ny varotra sy fampirantiana, ary tonga eto amin'ny firenena ho manam-pahaizana na manam-pahaizana manokana amin'ny tetikasa ara-barotra sasany.
Io Visa io dia mamela anao hijanona ao amin'ny firenena ihany 180 andro indray mandeha fa manan-kery mandritra ny herintaona na 365 andro ary a Visa fidirana misimisy, izay midika fa na dia afaka mijanona mandritra ny 180 andro aza amin'ny fotoana iray eto amin'ny firenena ianao dia afaka miditra amin'ny firenena imbetsaka raha mbola manan-kery ny e-Visa.
Ankoatry ny fepetra takiana ankapobeny amin'ny e Visa ho an'i India ho an'ny olom-pirenena amerikana voalaza etsy ambony dia mila antsipirihany momba ny fikambanana indianina na foibe fivarotana na fampirantiana izay hotsidihin'ny mpandeha ianao, ao anatin'izany ny anarana sy ny adiresin'ny referansa karana, ny tranokalan'ny orinasa karana hotsidihin'ny mpitsangatsangana, ny taratasy fanasana avy amin'ny orinasa Indiana, ary ny kara-pandraharahana na ny sonian'ny mailaka ary koa ny adiresy tranokalan'ny mpitsidika.
Visa Indiana avy any Etazonia ho an'ny fitsaboana ara-pitsaboana
Ireo olom-pirenena amerikana mandehandeha any India ho marary mba hahazoana fitsaboana dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fangatahana Visa Medical Indiana ho an'ny olom-pirenena amerikana amin'ny Internet. Afaka mangataka izany ianao raha marary ny tenanao ary handeha hitsabo tena any India. Ny Visa Fitsaboana Indiana dia Visa fohy ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana ny mpitsidika ny firenena, noho izany ianao dia afaka mahazo izany raha tsy mikasa ny hijanona mihoatra ny 60 andro amin'ny fotoana iray ianao. Izy io koa dia a Visa fidirana telo, izay midika fa ny tompon'ny Visa Medical Indiana dia afaka miditra intelo ao amin'ny firenena ao anatin'ny vanim-potoana maha-ara-dalàna azy. Na eo aza ny visa maharitra dia azo atao in-3 ao anatin'ny taona.
Ankoatry ny fepetra takiana ankapobeny ho an'ny olom-pirenena any India sy Visa voalaza etsy ambony dia mila kopian'ny taratasy avy amin'ny Hopitaly Indianina tadiavinao fitsaboana ary takiana aminao ihany koa ny valiny amin'ny fanontaniana momba ny Hopitaly India izay hitsidihanao.
Visa Indiana avy any Etazonia ho an'ny mpitsabo
Ny olom-pirenena amerikana mandeha any India miaraka amin'ny marary izay handeha hitsabo tena any India dia afaka manao izany amin'ny alàlan'ny fangatahana Medical e Visa ho an'i India ho an'ny Citizens US amin'ny Internet. Ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny marary mandeha any India izay efa nanana na nangataka ny Medical e-Visa dia afaka mahazo an'ity Visa ity. Toy ny Visa Medical Indiana, ny Visa Mpanatrika Fitsaboana Indiana dia visa fohy ary manan-kery mandritra ny 60 andro aorian'ny datin'ny fidirana an'ny mpitsidika ny firenena, fa azo atao koa intelo ao anatin'ny taona. Visa mpanatrika mpitsabo 3 ihany no omena visa tsy ara-pitsaboana iray
Ankoatra ny fepetra ankapobeny ho an'ny India Visa ho an'ny olom-pirenena amerikana voalaza etsy ambony dia mila ny anaran'ny marary izay tsy maintsy tompon'ny Medical Visa, ny nomeraon'ny Visa na ny ID fampiharana an'ny tompon'ny Visa Medical, ny laharan'ny pasipaoro amin'ny Visa Medical. ny tompon'andraikitra, ny daty nahaterahan'ny mpihazona Medical Visa, ary ny zom-pirenen'ny mpihazona Visa Medical.
Raha mahafeno ny fepetra takiana sy ny fepetra takiana ianao dia afaka mangataka amin'ny iray amin'ireo Visa any India sy Etazonia. The Fangatahana fangatahana Indiana Visa ho an'i India E Visa Ny olom-pirenena US dia tsotra sy tsotra ary tsy hahita fahasahiranana amin'ny fampiharana sy fahazoana ny Visa ianao. Raha toa kosa ka mila fanazavana ianao tokony Biraika fanampiana Visa Indiana ho fanohanana sy fitarihana.